Degso Secret Neighbor loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (2764.80 MB)
Degso Secret Neighbor,
Deriska Qarsoodiga ah waa nooc ka mid ah ciyaartoy badan oo loo yaqaan Hello Neighbor, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagala soo baxo oo lagu ciyaaro ciyaaro naxdin leh oo ku saabsan kombuyuutarka iyo moobiilka.
Soo Degso Deris Qarsoodi ah
Deriska Qarsoodiga ah waa ciyaar argagax badan oo bulsheed lagu ciyaaro halkaas oo koox ku soo xadgudub ahi ay isku dayaan inay ka badbaadiyaan saaxiibadood dhulka hoostiisa ee baqdinta leh. Dhibaatadaada kaliya ayaa ah in mid kamid ah kuwa soo duulay uu yahay deriska isqarinaya.
Deriska Qarsoodiga ah waa ciyaar cabsi badan oo bulsheed oo argagax leh oo lagu dhigay isla goobta ay ku taal Hello Deriska. La sahaab saaxiibbada guriga saaxiibbada ah, laakiin ka taxaddar; midkood waa deriska isqarinaya. Wada dhaqaaq oo ka badbaadi saaxiibkaa qolka hoose ama ku mashquuli qof walba deris ahaan!
6 ciyaartoy 1 xumaanle: Xisbigaagu wuxuu leeyahay hal hadaf oo keliya; Ku dhuuqo guriga agtiisa adigoo furaya furaya si aad u furto albaabka guriga hoostiisa. Dhibaatada kaliya; Midkiin baa deris ah, khaain waddan ah!
U ciyaar sida ilmo: La shaqee asxaabtaada, isla joog ama si xeeladeysan u kala tag, adeegso xirfadahaaga oo albaabbada midigna u fur
U ciyaar sida Deris: Jooji kuwa ku soo xadgudbaya! Qarsoodi gal si aad u kasbato kalsoonidooda, dabin u dhig oo mid mid u soo qaado kuwan soo duulayaasha ah. Ka dhaadhiciso asxaabtaada in derisku yahay qof kale oo ay bilaabaan ugaarsiga. Sirtaadu waa inay nabad ahaataa!
Dhiso guri kuu gaar ah: Ma leedahay khibrad kugu filan oo aad ku dhex mari karto khariiddada indhahaaga oo xiran? U beddel Tifaftiraha Cutubka oo samee astaamo adiga kuu gaar ah, ka dib ku martiqaad saaxiibbadaa inay ciyaaraan!
Shuruudaha Nidaamka Dariska Qarsoodiga ah
Qalabka loo baahan yahay inuu ku ciyaaro ciyaarta Sirta Deriska ee kombuyutarkaaga PC-ga waxaa lagu qeexay hoos Nidaamka Ugu Yar ee Ugu Yar ee Nidaamka Nidaamka lagula taliyay:
Shuruudaha nidaamka ugu yar
Nidaamka Howlgalka: Windows 7 iyo wixii ka sarreeya processor-ka 64-bit ah
Xusuusta: 6GB RAM
Kaadhka Fiidiyowga: NVIDIA GeForce GTX 760, Radeon R9 270
Shabakad: Xidhiidhka Internetka ee Broadband
Kaydinta: 5 GB oo bannaan
Shuruudaha nidaamka lagu taliyay
Nidaamka Howlgalka: Windows 10 64-bit processor
Xusuusta: 8GB RAM
Kaadhka Fiidiyowga: NVIDIA GeForce GTX 1060, Radeon RX 580
Barnaamijyada La Xiriira: Degso Hello Neighbor 2
Secret Neighbor Noocyada
Cabirka Faylka: 2764.80 MB
Horumar: tinyBuild LLC
Wararkii Ugu Dambeeyay: 12-08-2021
Waxaan u ciyaarnay ciyaaro badan hal-abuurka halyeeyga ah Eebaha siddooyinkii, iyo cayaartii ugu...
Deriska Qarsoodiga ah waa nooc ka mid ah ciyaartoy badan oo loo yaqaan Hello Neighbor, oo ah mid ka...
Vindictus waa ciyaar MMORPG ah halkaas oo aad kula dagaallanto ciyaartoy kale oo garoonka jooga. ...
DayZ waa ciyaar door-ku-ciyaar ah oo khadka tooska ah ku leh nooca MMO, kaas oo u oggolaanaya...
Necken waa ciyaar ficil-ficil ah oo ciyaartoydu si qoto dheer ugu galaan hawdka Sweden. ...
ELEX waa ciyaar RPG-ku-saleysan adduunka oo furan oo ay kooxdu soo saartay, taas oo markii hore la...
SCARLET NEXUS waa ciyaar waxqabad door-ciyaar ah oo soo bandhigeysa ciyaar ka timaadda qof kamarad...
Ultima Online waa ciyaar MMORPG oo markii ugu horreysay la daabacay 1997 waxayna furtay bog cusub...
Rappelz waa ikhtiyaar aad u soojiidasho leh oo loogu talagalay kuwa jecel ciyaarta kuwaas oo...
Duubabka Waayeelka ee Online -ka waa RPG -ga tooska ah ee ku jira nooca MMORPG, qeybtii ugu...
Warlord Saga, oo ah ciyaar MMORPG ah oo ciyaartoy kastaa ku abuuri karo astaamo u gaar ah isaga oo...